Gmail မှာ နောက်ရိုက်ရမယ့်စာကို ခန့်မှန်းပေးနိုင်တဲ့ Smart Compose ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?
14 May 2018 . 2:34 PM
Google ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ Google I/O 2018 Developer Conference မှာ Gmail နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Smart Compose လို့ ခေါ်ဆိုထားတဲ့ ကိုယ်ရိုက်နေတဲ့ Mail ကို အလိုအလျောက်အဆုံးသတ်ပြီး စာကြောင်းစီပေးမယ့် Feature တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Google Gmail ရဲ့ Smart Compose Feature က အခုအချိန်မှာ ပုံမှန်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့တော့ ရရှိဦးမှာမဟုတ်ပေမယ့် တကယ်လို့ စမ်းပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အသုံးပြုနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမျိုး Google Gmail ရဲ့ Smart Compose ကို အသုံးပြုရမလဲဆိုရင် Gmail အသစ်ကို အသုံးပြုနေဖို့ လိုအပ်ပြီး တကယ်လို့ Gmail အသစ်ကို အသုံးမပြုရသေးဘူးဆိုရင် Setting ထဲက “Try out new Gmail” ကို နှိပ်ပြီး အရင်ပြောင်းလဲရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ Gmail ရဲ့ Setting ထဲကို သွားပြီးတော့ “Enable Experimental Access” ဆိုတဲ့ Option ကို အမှန်ခြစ် On ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
How to do Smart Compose
အခုလိုမျိုး ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Mail အသစ်ကို Compose ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ စာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ရိုက်ရမယ့် စာကြောင်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကြိုပြိး ရိုက်နိုင်မယ့် စာသားကို မှိန်မှိန်လေးနဲ့ Suggestion မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါ စာသားကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် “Tab” Key ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Gmail ရဲ့ Smart Compose Feature ဟာ Stable မဖြစ်သေးပဲ Experimental အဆင့်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် အမှားအယွင်းတခါတလေရှိနေနိုင်တယ်လို့ Google က ပြောကြားထားပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလွန်ကျွမ်းကျင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Smart Compose Feature က English Language မှာပဲ ရရှိနေသေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု Google ရဲ့ Smart Compose Feature ဟာ ရှည်လျားတဲ့ လိပ်စာတွေအပြင် အမြဲတမ်းပြောနေဖြစ်တဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့စကားတွေကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ အလိုလျောက်ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သိသိသာသာကို အချိန်ကုန်လျော့ချပေးနိုင်တော့မှာပါ။
Google ကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ Google I/O 2018 Developer Conference မှာ Gmail နဲ့ ပတျသတျပွီး ပွောငျးလဲမှုတဈခုကို ကွညောသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ Smart Compose လို့ ချေါဆိုထားတဲ့ ကိုယျရိုကျနတေဲ့ Mail ကို အလိုအလြောကျအဆုံးသတျပွီး စာကွောငျးစီပေးမယျ့ Feature တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ Google Gmail ရဲ့ Smart Compose Feature က အခုအခြိနျမှာ ပုံမှနျအသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့တော့ ရရှိဦးမှာမဟုတျပမေယျ့ တကယျလို့ စမျးပွီး အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျလညျး အသုံးပွုနိုငျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
ဘယျလိုမြိုး Google Gmail ရဲ့ Smart Compose ကို အသုံးပွုရမလဲဆိုရငျ Gmail အသဈကို အသုံးပွုနဖေို့ လိုအပျပွီး တကယျလို့ Gmail အသဈကို အသုံးမပွုရသေးဘူးဆိုရငျ Setting ထဲက “Try out new Gmail” ကို နှိပျပွီး အရငျပွောငျးလဲရမှာပါ။ ပွီးရငျတော့ Gmail ရဲ့ Setting ထဲကို သှားပွီးတော့ “Enable Experimental Access” ဆိုတဲ့ Option ကို အမှနျခွဈ On ပေးရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ပွုလုပျပွီးသှားပွီဆိုရငျ Mail အသဈကို Compose ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာ စာရိုကျနတေဲ့အခြိနျမှာ နောကျရိုကျရမယျ့ စာကွောငျးကို ကွိုတငျခနျ့မှနျးပေးသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး ကွိုပွိး ရိုကျနိုငျမယျ့ စာသားကို မှိနျမှိနျလေးနဲ့ Suggestion မွငျရမှာဖွဈပွီးတော့ အဆိုပါ စာသားကို အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျ “Tab” Key ကို နှိပျလိုကျတာနဲ့ ခကျြခငျြး ဖွညျ့ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အခု Gmail ရဲ့ Smart Compose Feature ဟာ Stable မဖွဈသေးပဲ Experimental အဆငျ့ပဲရှိသေးတဲ့အတှကျ အမှားအယှငျးတခါတလရှေိနနေိုငျတယျလို့ Google က ပွောကွားထားပွီးတော့ နောကျပိုငျးမှာတော့ အလှနျကြှမျးကငျြလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ လောလောဆယျမှာ Smart Compose Feature က English Language မှာပဲ ရရှိနသေေးတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခု Google ရဲ့ Smart Compose Feature ဟာ ရှညျလြားတဲ့ လိပျစာတှအေပွငျ အမွဲတမျးပွောနဖွေဈတဲ့ နှုတျဆကျတဲ့စကားတှကေို ခလုတျတဈခကျြနှိပျရုံနဲ့ အလိုလြောကျဖွညျ့ပေးသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ သိသိသာသာကို အခြိနျကုနျလြော့ခပြေးနိုငျတော့မှာပါ။